Miba ရဲ့ Professional Diploma In AI အတန်းကိုတော့ Stay Home ကာလ အိမ်မှာနေရင်း Online စာသင်ခန်းတွေကတစ်ဆင့် တက်ရောက်သင်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းကို AI ရဲ့နည်းစနစ်ကို ဘယ်လို စတင်မယ်ဆိုတာ လေ့လာလိုသူများ၊ မိမိတို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မြှင့်တင်လိုသူများ၊ Neutral network တွေ သုသေသနလုပ်လိုတဲ့ software engineer များ၊ Robotic Process Automation and Gaming System for AI flow စတဲ့ နည်းပညာရပ်ကို လေ့လာလိုသူများ တက်ရောက်ထားသင့်တဲ့ သင်တန်းဖြစ်ပြီး Artificial Intelligence, Statistics Essentials, Pre-Program Preparation, Machine learning, OPEN-CV, Natural Language Processing, Deep Learning, TensorFlow စတဲ့ AI နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိသင့်သိအပ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းမှာ ဒေါက်တာငြိမ်းအေး , Ph.D. (MEPhI), M.E. (MEPhI) , M.A.Sc. (Computer Engineering UCSY , B.E. (Electronic Engineering) က သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကို မိမိတို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့၊ သင်ယူချင်တဲ့ ဘာသာရပ် ဆိုင်ရာ အခြေခံသဘောတရားတွေနဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို Miba University Online Learning ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ စနစ်တကျ စီစဉ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ video တွေကို သင်ခန်းစာအလိုက် တင်ထားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းတက်နေစဉ် အချိန်အတွင်းမှာ သင်ခန်းစာတွေကို အချိန်မရွေး ပြန်ကြည့်ပြီး သင်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် နားမလည်မှာ ၊ မလိုက်နိုင်မှာကိုလည်း စိတ်ပူစရာ မလိုဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျောင်းသား/သူတွေဟာ သင်ကြားမှု ပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာ တတ်မြောက်မှုစစ်ဆေးတဲ့ MCQ ပုံစံစာမေးပွဲကို ဖြေဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြေဆိုပြီး သတ်မှတ်ချက်အတွင်း အောင်မြင်မှသာ ABE( Endorsed ) မှပေးအပ်ချီးမြှင့်တဲ့ တရားဝင် Professional Diploma ကိုရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းကြေး ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်၊ စာမေးပွဲကြေး နှစ်သိန်းကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကို မတ်လ ၁၃ ရက်မှာ စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Miba university ဖုန်း – ၀၉ ၇၆၅၄၉၀၁၇၀ ကို ဆက်သွယ် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။